The Source - Page 320 of 328 - Independent financial and business news
Gains in OK, Natfoods propel ZSE
HARARE, Sep 17 (The Source) – The stock market closed in positive territory helped by gains in consumer facing National Foods and OK Zimbabwe. National Foods added three cents to 218 cents in the wake of buoyant June finals and OK Zimbabwe put on 0.99… Read More
Zimbabwe to accelerate indigenisation of foreign owned firms – Mugabe
HARARE, September 17 (The Source) – Zimbabwe will accelerate its controversial black empowerment policy and set up a Sovereign Wealth Fund to mobilise resources for infrastructure development, President Robert Mugabe said on Tuesday. “Implementation of the country’s indigenous laws is to be pursued with renewed… Read More
ZSE opens week lower on Econet loss
HARARE, Sept 16 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange’s main industrial index opened the week in the negative, shedding 0, 57 points or 0, 30 percent to close at 187, 78 points, pegged back by losses in Econet and Dairibord amid few trades. Telecoms giant Econet… Read More
Proposed planning commission could bring policy clarity – analyst
HARARE, Sep 13 (The Source) – The proposed national economic planning commission would be key in bringing policy consistency and focusing Zimbabwe’s bid to attract foreign direct investment, a top analyst said on Friday. In addition to naming a new cabinet on Tuesday, President Robert… Read More
ZSE closes week on losing note
HARARE, September 13 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange’s main industrial index dropped a further 1.89 points (0.99 percent) to close at 188.35 points on Friday, dragged low by losses in heavyweights Delta and Econet. Delta shed 4.81 cents to close at 120.09 cents… Read More